Itoobiya oo markii labaad weerar ku qaaday Eritrea wararkii ugu dambeeyey colaadaasi – SBC
Itoobiya oo markii labaad weerar ku qaaday Eritrea wararkii ugu dambeeyey colaadaasi
Posted by editor on March 19, 2012 Comments
Ciidamada Itoobiya ayaa la xaqiijiyey in weerarkii labaad ay ku qaadeen gudaha wadanka Eritrea iyadoo tani noqonayso duulaankii labaad ee mudo todobaad ah ay qaado Itoobiya.
Sarkaal sare oo ka tirsan dawlada Itoobiya oo la hadley wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegay in ay duulaan ku ekeeyeen fariisimo ku yaal gudaha Eritrea iyadoo tanina ku soo aadayso maalin uun ka dib markii dawlada Eritrea ay ka dalbatey qaramada Midoobay inay ka qaado talaabo duulaankii hore ee Itoobiya ka geysatey dalkeeda.
“Waxaynu qaadney dagaalo dheeraad ah oo aan ka fulinayey gudaha Eritrea, markan hawlgalka waxaan ku qaadney dhanka waqooyiga una Badme ayuu yiri sarkaalka sare ee dawlada Itoobiya u hadley.
Maagaalada Badme ee gulufka military uu ka dhacay waxay ku taal xuduuda Eritrea & Itoobiya waxayna xudun u aheyd colaadii labadaasi wadan dhexmartey sanakdii 1998-dii, iyadoo lagu muransan yahay lahaanshaha magaaladaasi.
“Mar kale hawlgalkeenu wuxuu ahaa mid guul ku soo idlaadey, weerarkana wuxuu qayb ka yahay qorshihii ayn ku qaadney duulaankii hore ee ka dhacay Koonfurta Bari ee Eritrea” ayuu yiri sarkaalkan oo ka gaabsadey in magaciisa ay shaaciso Reuters.
Sarkaalkan ma aanu sheegin cida ay ku beegsadeen weerarkan labaad, waxaana tani sii holcinaysaa xiisada colaadeed ee labada wadan u dhaxaysa.
Maalinimadii Khamiista ciidamada Itoobiya waxay weeraro ku ekeeyeen sadex saldhig oo ku yaal gudaha Eritrea kuwaasi oo ay ku tilmaamtey in Eritrea ku tababarto kooxo ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen dilkii shan qof oo reer Galbeed ahaa oo dalxiis u tagey dhulka miyiga ee Cafarta degto ee Itoobiya bishii January ee sanadkan.
Eritrea waxay sheegtey inaanay duulaankaasi uga jawaabi doonin mid la mid ah iyadoo ku eedeysay dawlada ay dariska yihiin inay hurinayso colaad cusub, waxayse xukuumada Casmara ay sheegtey inay ka dalbanayso qaramada Midooay sidii ay talaabo uga qaadi laheyd wax ay ku tilmaamtey daandaansiga xukuumada Adis Ababa.
Hadal hayeen u hadley xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in xoghayuhu ugu baaqayo labada dhinac inay qaadaan talaabooyin ay isku xakameynayaan ayna mid kastaa xushmeyso madaxbanaanida dhul.
Gudiga xuduuda Eritrea-Ethiopia Boundary Commission ee fadhigiisu yahay magaalada Hague waxay sanadkii 2002-dii xukmiyeen in tuulada Badme ee ku taal xuduuda labada wadan ay leedahay Eritrea, laakiin ilaa iyo hada tuuladaasi oo ay degan yihiin dad ka yar 2 kun oo qof waxaa haysata Itoobiya.